Sida loo Delete podcasts ka iPhone e
Sida loo Delete Podcasts ka iPhone
Qaybta 1. Sida loo tirtiri podcasts ka iPhone
Podcasts waaweyn yihiin qaar ka mid ah oo naga mid ah laakiin mararka qaarkood waxaad heli kartaa podcasts aad u badan oo ku saabsan iPhone in ay kor u qaadan meel aad u badan. Waxaad tirtiri kartaa qaar ka mid ah podcasts kor u qaadanayso in meel lagu kaydiyo aad iPhone. Bal aynu eegno mid si oo taas loo samayn in tallaabo by tutorial tallaabo.
Talaabada Koowaad: Burcad app Podcasts ah
Tallaabada Labaad: Tubada taxane podcast aad jeclaan lahayd in ay tirtirto qaybta "My Podcasts" a.
Tallaabada Saddexaad: Halkan ka heli dhacdo aad u jeclaan lahaa in ay tirtirto ka dibna gudban mari horyaalka oo dhan. A casaan "Delete" button ka muuqan doontaa xaq ah podcast ah. Si aad u tirtirto waydaarsaday, si fudud ka jaftaa on "tirtirto"
Waxaa fudud in. Dhacdadii si toos ah tirtirayaa ka iPhone. Inta badan, aad rabto in aad tirtirto xog gaar ah oo ku saabsan iPhone sidaas waxaad ka heli kartaa meel ka mid ah. Sii daynta ilaa meel lagu kaydiyo aad iPhone u ogolaanaya telefoonka heer aan fiicnayn. Iyadoo la tirtiro qaar ka mid ah dhacdooyin podcast shaqeeyaan laga yaabaa, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto badan oo xogta la isticmaalin si lacag la'aan ah ilaa meel ku filan si aad iPhone si fiican u ciyaaray.
Qaybta 2. 1 click oo bilaash ah ilaa meel dheeraad ah oo aad iPhone
Takhalusid mid xogta waqti qaadan kartaa waqti aad u dheer, markii aan hubin aadan haysan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay codsi caawin doona in aad lacag la'aan ah ilaa meel aad iPhone oo aan ilaa waqti aad u badan. Wondershare SafeEraser waa codsi ah in kuu ogolaanayaa inaad kaliya in sameeyo waxyaabo kale. Qaar ka mid ah muuqaalada SafeEraser ayaa waxaa ka mid ah;
Sidee oo bilaash ah ilaa meel dheeraad ah oo ku saabsan iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser
Raac tallaabooyinkan fudud si lacag la'aan ah wax badan oo ka mid ah meel ilaa aad iPhone.
Tallaabada Koowaad: download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Orod barnaamijka ka dibna xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Codsiga waxaa lagu ogaan doonaa iPhone oo waa in aad suuqa kala socda.
Tallaabada Labaad: Riix "Nadiifinta 1-click" furmo suuqa ugu weyn.
Talaabada Sadexaad: Barnaamijku wuxuu isla markiiba bilaabi doonaan inay iskaan qalab aad.
Talaabada Afraad: Marka geedi socodka iskaanka waa dhameystiran, xaddiga iyo nooca files junk lagu soo bandhigi doonaa. Guji "Nadiifinta" oo bilaash ah ilaa qalab aad.
Tallaabada shanaad: hubiyo in qalab aad xiran yahay si aad u computer inta ay socoto oo dhan si loo hubiyo in dhammaan faylasha junk yihiin tirtirayaa.
Talaabada Lixaad: marka nidaamka dhamaato, waxaad arki doontaa suuqa kala socda in bandhigayaa tirada saxda ah ee meel bannaan oo aad qabto oo ku saabsan qalab aad.
In daaqadan final, in aad sidoo kale dooran kartaa "Rescan" haddii aadan ku qanacsanayn natiijada ama guji "Home" in dib u furmo suuqa hoose tagaan.
Waa in si fudud loo nadiifin ilaa aad iPhone faylasha junk. Tani waxa lagama maarmaan ah haddii aad rabto in la soo celiyo qalab aad si ay heerka asalka qaab.
> Resource > iPhone > 1.How in ay tirtirto podcasts ka iPhone